Porn က Erectile Dysfunction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ Alvaro Ocampo MD မှ (၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်порноတွင်
Porn အကြောင်း Erectile အလုပ်မဖြစ်သလော
သြဂုတ်လ 9, 2019 Alvaro Ocampo MD အားဖြင့်
လိင်ပွဲတစ်ပွဲကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ ဒါဟာကျနော်တို့၏လုံလောက်စွာမရနိုင်ပြီးမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရပါဘူးသူတို့အားလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့အစားအစာ, ရေထုနှင့်လေထုနှင့်အတူလက်ျာဘက်တက်အဲဒီမှာသူကအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ ဝမ်းနည်းစရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည့်စိတ်ဓါတ်များအတွက်အမြဲမဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ကျနော်တို့အခုအချိန်မှာမည်သူမဆိုချိန်းတွေ့ကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က Web Browser နဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာ solved- ဖွင့်သို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုသလော
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုငယ်ရွယ်ပြီးအသက်ကြီးအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေအဖြစ်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှန်ဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏အတွေးတစ်တရားခံအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကိုအသစ်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့အကြောင်းအရာကျယ်ပြန့်သောပမာဏပိုမိုရရှိနိုင်ဖြစ်လာမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်လမ်းပေါ်မှာချမဂ္ဂဇင်း purchasing ထက်အများကြီးပိုလွယ်သည်။ porn ၏နယူးအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားများအခမဲ့-in ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို Format ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအငျတာနကျပျေါနေ့စဉ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှင်းနေသည်မှာ, ဤနှစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ဦး option ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ပူးပေါင်းလိင်ဆက်ဆံ၏အခါသမယမှထနိုငျအောငျအဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ခံစားနေရပြီးကျန်းမာ, လူပျိုများမှာအဘယ်ကြောင့်အစစ်အမှန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနောက်ကျသည်။ နောက်ထပ်ပုံမှန်အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတဆင့် orgasm အောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းကိစ္စရပ်များရှုပ်ထွေးစေရန်။ ဒီအကြှနျုပျတို့အားလုံးရှုပျသှားရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သည် erectile (စ ED အဖြစ်လူသိများ) ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်လိင်အဘို့အလုံလောက်အောင်တည်ငြိမ်တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတိုင်းဤစိတ်ပျက်ကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့မကြာခဏကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်အတူသို့မဟုတ်အိုမင်းဆက်နွယ်နေသည်ယူဆပေမယ့်လိင်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အဓိကလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခု, ဦးနှောက်ကိုရှင်းပြမထားဘူး။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က ... စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရမယ် (ED) တကယ်တော့သို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီ porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု .is?
porn သွေးဆောင် ED ကယ့်အရာလား?
ဒီမှာအတိုအဖြေကိုသုတေသနနေဆဲစုဆောင်းပေမယ့်ဟုတ်တယ်ဆီသို့မြှောင်ခံရဖြစ်ပါတယ်။ အတော်ကြာလက်တွေ့လေ့လာမှုများ porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကောက်ယူခဲ့ကြပေမယ့်သူကညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများလက်ရှိတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမဟုတ်သိရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအိုး (1) ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးစိစစ် option ကိုအဖြစ်ကိုမရရှိနိုင်ကြောင်း, ဟုတ်တယ်, ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကအရာရှိတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမရသောကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအဖြစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံသည်မဟုတ်မဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့အများအပြားလေ့လာမှုများ porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တူခံစားသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုအကြောင်းကိုယောက်ျားဦးနှောက်ရဲ့အနက်ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုအဝတ်မခြုံဘဲပါပြီ။
ဤသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများကဲ့သို့ဒုက္ခကိုပိုမိုဘာမှထက်ကဆင်းရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်း၌ပေါ်မယ့်အရာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ကိုဆိုလိုသည်။ (4, 2)
လူတိုင်းမလိင်သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအကြား link တစ်ခုရှိသေး၏သဘောတူ။ ကနေအစောပိုင်း 2019 ထုတ်ဝေဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းယနေ့တွင် လုံးဝကြောင့်များနှင့်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုပယ်ချ။ သူတို့ဟာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်သည့်အချက်များသာအသက်အရွယ်နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြစ်ကြဟုဆိုသည်။
ဤသည်မှာသော်လည်းယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပုံရသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စိတျနဲ့လိင်အကြားအများအပြားဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ တောင်မှရိုးရိုးအလုပ်မှာရှည်လျား နေ့မှစ. စိတ်ပိုင်းမောဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စေတနာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။
ဘယ်လို porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုငါ့ကိုယ်ကိုထိခိုက်သနည်း?
ကျေးဇူးတင်စရာသိပ္ပံပညာရှင် porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဖြစ်နိုင်သော connection ကိုမှအဖြေကိုရှာတွေ့ဆီသို့အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
2015 မှာတော့ Los Angeles မြို့တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာနထံမှသုတေသီ Prause အင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု ဆက်စပ်. အတွက်အထီးအတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းမြင့်မားသောပမာဏကိုကြည့် 280 ယောက်ျားလေ့လာနေပြီးနောက်သူပူးပေါင်းလိင်မရှိတော့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းလိုအပ် dopamine ပမာဏကိုဖြန့်ချိရန်လုံလောက်သည့်ပါဝင်သူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ (2) ကောက်ချက်ချ
ဤသည်ကိုအညစ်ညမ်းမြင့်မားသောပမာဏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင် Partners လိင် desensitizing နိုင်ယုံကြည်ပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒါဟာ Park ရဲ့အစောပိုင်းလေ့လာမှုကနေယခင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုသတိပေးခဲ့သည်။ ပန်းခြံနိဂုံးချုပ်သည့်အခါက "ကျော်လိင်ပူးပေါင်းဘို့ယောက်ျားပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုစတင်ခဲ့ရာမှာငယ်ရွယ်သောအသက်, ထိုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသူတို့၏ preference ကို, နည်းခံစားသူတို့ပူးပေါင်းလိင်ကနေသတင်းပို့, သူတို့၏လက်ရှိအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မား။ "
အငယ်အထီးစိတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်မိမိအဟောင်းများကိုနှစ်ပေါင်းသို့လိုက်နာရန်နှင့်ပူးပေါင်းလိင်တွေ့ဆုံထိခိုက်နိုင်သွေးဆောင် porn ဖို့နိဒါန်းအကြားဒီ link ။
သို့သော်လူတ porn သူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်ဟုမဆိုလိုပါကိုချောင်းမြောင်းရုံကွောငျ့, စောင့်ပါ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတားဆီးပေးသောညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုပမာဏကိုစပ်လျဉ်းရှိသေးငယ်တဲ့အရိပ်လက္ခဏာရှိပါသလား
ကျနော်တို့အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်ကနေဖြန့်ချိမယ့်အစီရင်ခံစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကဒီအမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်များတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကြားနေရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြင်ကွင်းပြီးနောက်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါကြားနေရုပ်ရှင်ကိုမွငျလြှငျသူတို့သညျရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုမွငျလြှငျသူတို့သညျထက်နေဆဲဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတုန့်ပြန်ပြသခဲ့သည်။ သူတို့မှာလည်းကျောရိုး tendinous တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာသောဤလူတို့သညျကနေနှုတ်တုံ့ပြန်မှု။ (3) တိုင်းတာနေချိန်မှာ
ဤသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလိင်မှဆက်စပ်မှုအတွက်လေ့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်ဘူး။
ဒေါက်တာ Andrzejewski ဒေါက်တာဟော့ဖ်မန်းကနေနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ porn သွေးဆောင်လိင်နှင့်မည်သို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုအနေဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြေသည်။
porn သွေးဆောင်လိင်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဒီကိုဆိုလိုတာလေ့ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့လိင်တုံ့ပြန်ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့၏စိတျနဲ့အလောင်းတွေအခြေအနေနိုင်မလဲ?
ဒေါက်တာ Andrzejewski ရဲ့ 2013 လေ့လာမှုစိတ်ခွန်အားနိုးဆုလာဘ် system ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်
porn သွေးဆောင်လိင်နှင့်အတူချိတ်ဆက် neurotransmitters ။ သူ့ကိုနှင့်ဒေါက်တာဟော့ဖ်မန်းလိင်စိတ်နိုးထဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှခြွင်းချက်ကြောင်းသီးခြားလေ့လာမှုများအတွက်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ (4, 5)
ဒီမလုံလောကျခဲ့လြှငျ, 2013 အတွက် Seigfried-Spellar အားဖြင့်အခြားလေ့လာမှုနောက်ထပ်ဖျောပွခွငျးဖွငျ့ဤစိတ်ကူးကိုအတည်ပြု, "အေးစက်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ဆွဖို့အရသာနှင့်အတူ ... ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုလည်းဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ "
ဤသည်ကိုအများအတွက်သဘောတူညီမှုတံဆိပ်ခတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် Partners လိင်လျော့နည်းကြိုးပါစေနှင့်ပင်လျော့နည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန် porn သွေးဆောင်လိင်ဆက်ဆံနေဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်လျှင်, porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအလွန်ကောင်းစွာဆက်နွယ်နေကြောင်းနိုငျသညျ။
ငါ porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏သက်ရောက်မှု reverse နိုင်သလား?
porn အကြောင်းမရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနိုင်သလား? အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့တစျခုထက်ပိုအသေးစိတ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်မှန်လျှင်, ကျနော်တို့ကအကြောင်းအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း ဟုတ်ပါတယ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံမှန်ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်လာလျှင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆရာဝန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏဖော်ပြထားခြင်းရန်အရေးကြီးပါသည်။ porn-သွေးဆောင်လိင်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုရှိသည်ပါဘူးသတိရပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဤဖော်ပြထားခြင်းကြဘူးတယ်ဆိုရင်သူတို့ပင်ကျန်းမာရေးစိစစ်ကာလအတွင်းကအကြောင်းမေးရန်မသိရပေမည်။
သငျသညျသေးဆရာဝန်သွားရောက်အတော်လေးအဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကြီးစွာသောအရာ Park ရဲ့လေ့လာမှု porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဆောင်ကြဉ်းရမဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအရလဒ်များကိုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ် "(သည် psychosexual ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ICD-9 ကုဒ် 302.7)" "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED, အခက်အခဲ orgasming နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ) မှပေါ်ထွက်လာသောမဟုတ်, သူတို့ကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်နောက်ပြန်လှည်ဖြစ်ကြ၏အတိုင်းအတာအထိရှိပါတယ်" ဟုပြောသည် (1) ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဤကွီးစှာသောသတင်းပါ! ဆေးသမားအများကြီးခြေလှမ်းအစီအစဉ်များတွင်တွေ့မြင်ကုသမှုတူသောကုသမှုအပြုအမူပုံစံများကိုအကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါစီရင်ချက် porn အကြောင်းမရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမကဘာလဲ?
အခုအချိန်မှာ၏အဖြစ်, porn ED ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကောက်ချက်ချရန်မနှင့်လမ်းလည်းမရှိ။ ED သွေးဆောင်အဆိုပါ porn ချိတ်ဆက်သစ်ကိုသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါ, ငါတို့နေဆဲဆွစိတ်ကိုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုအမြင်-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပိုမိုသိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့အထီးလိင်ဘဝကိုလွှမ်းမိုးညစ်ညမ်း၏အသင်းအဖွဲ့များအတွက်ပိုပြီးသုတေသနပြုရှိလိမ့်မည်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့်အတူဤစစ်တိုက်အတိုင်ပင်ခံကျော်လွှားလျှင်အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင်သတင်းအချက်လက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ချက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကိုအဖြစ်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြောင်းမရှိနှင့်ကုသမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအဘို့ဆရာဝန်တစ်ဦးထံအရောက်သွားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ပန်းခြံ BY, Wilson က, G, Berger J ကို, Berger J ကို, Christman M က, Reina B က, ဆရာတော်က F, Klam WP, Doan AP ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ယာဉ်ကြော SD, ed ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2016;6(3): 17 ။ Doi: 10.3390 / bs6030017 ။
Prause N ကို, Pfaus ဂျေလိင် Med ။ 2015 ဇွန်;3(2): 90-8 ။
S က, Spiering M က, Everaerd W က, Laan EJ လိင် Res နှစ်ဦးစလုံး။ 2004 သြဂုတ်; 41 (3): 242-58 ။
Andrzejewski ME, McKee BL, Baldwin AE, ဘန်း L ကို, ဟာနန်ဒက်ဇ် P.Neurosci
Biobehav ဗျာ 2013 နိုဝင်ဘာ; 37 (9 Pt တစ်ဦး): 2071-80 ။
Hoffman ဟာ H ကို, Janssen အီး, Turner SL.Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2004 ဖေဖော်ဝါရီ; 33 (1): 43-53 ။
Seigfried-Spellar KC, ရော်ဂျာ MK deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2013; 29: 1997-2003 ။ Doi: 10.1016 / j.chb.2013.04.018.